feed crusher ukudayiswa,umshini wokudla wezilwane owondla izinhlanzi,izinkomo,imvu
Imodeli:SFSP56 * 36
Amandla:22KW izigaba ezintathu
Ububanzi beRotor:560 mm
Ububanzi beChamber Yokugaya:360 mm
Umkhiqizo wokugcina:impuphu ecolekile
Isetshenziselwa:ukwenza ukudla kwenkukhu,ukufuya izinkomo,,izinhlanzi,Ukudla kwezilwane zasekhaya
umshini we-feed crusher iyithuluzi elikhethekile lokugqekeza izinto ezinkulu zibe yimpuphu ecolekile. Izinsimbi ezichotshoziwe izando zesando ngamazinyo ajwayelekile zihlala zingama-0.6-1.5mm; futhi ichotshozwe ngamazinyo amahle ingumshini wokuchotshozwa ongu-1-2.5mm.feed kungumshini obhekene nezinto zokuchoboza ukushayisana phakathi kwesando nesivinini esikhulu,crusher yezilwane zokudla imishini ingumshini obhekene nezinto zokuchoboza ukushayisana phakathi kwesando nesivinini esikhulu. Izinto ezingavuthiwe ku-feed crusher zichotshozwa amasayizi ayizinhlayiyana afanele i-feed mixer indwendwe. Usayizi wokugcina wezinto zokwakha ungalawulwa ngokufaka isikrini esinemigodi eyahlukene ngosayizi. Ngentengo yokuncintisana, isakhiwo esilula kanye nokusebenza kahle kakhulu, Umshini wokudla wezilwane osetshenziswa kakhulu epulazini, ifektri ephakathi nendawo yokudla noma yokusebenzisa umndeni.
fakela izinzuzo zomshini we-crusher
● Kulula ukusebenza, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi okuqondile, ukugaya umkhiqizo onembile futhi ongaguquki
● Idizayini enengqondo: usayizi wokugcina wezinto zokwakha ungashintshwa ngokuya ngesilungisi sokungena kwesikrini esifanele. Ngaphezu kwalokho amandla okushintsha usayizi wesibuko, kanye nenketho yokulawulwa kwesivinini sokushintshashintsha kwejubane, vumela i-crusher ukucubungula izinto ezahlukahlukene.
● Izingxenye eziyisithupha zesando zenziwa ngensimbi ephezulu yekhabhoni, okuhlala isikhathi eside futhi kungavikeleki. Impilo ende nokuqina.
Isicelo Sokupholisa Izilwane
I-crusher yokudla kwezilwane isetshenziswa kakhulu epulazini, ifektri ephakathi nendawo noma yokusetshenziswa komndeni. Lesi siga sokudla singasetshenziselwa ukuncishiswa kwezinhlayiya eziningi ezahlukene:
Materials Izinto zezolimo, njengembila, ummbila, Isiqu sommbila, igobolondo lamantongomane, utshani obomile, ukhuni ukotini, njll.;
Materials Izinto zokwenziwa kwezemithi nezimboni, njengezitshalo zemithi yaseChina, i-quartz, amalahle, izinsalela zamalahle, izinkuni, njll
Izinto ezingemuva zokuphakelwa kwe-crusher zichotshozwa ezinhlayiyeni ezifanele zokuphaka zihlanganisi. Usayizi wokugcina wezinto zokwakha ungalawulwa ngokufaka isikrini esinemigodi eyahlukene ngosayizi. Ngentengo yokuncintisana, isakhiwo esilula kanye nokusebenza kahle kakhulu, umshini wokuqhoboza okuphakelayo kwezilwane uvame ukuqashwa epulazini, ifektri ephakathi nendawo yokudla noma yokusebenzisa umndeni.
Okuphakelayo komshini we-crusher
Imodeli SFSP56 * 30 SFSP56 * 36 SFSP56 * 40 SFSP60 * 45
Ububanzi beChamber Yokugaya
Ividiyo yomshini we-feed crusher